Video Editing Software များ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Video Editing Software များ မာတိကာ
Adobe Premiere Pro CS4 ( latest )
Adobe Premiere Pro 2.0 ( Portable )
Adobe Premiere ( Training Videos ) & Ebooks
SID Video Cutter Splitter Pepe
Ulead DVD Movie Factory3disc creator
Ulead Video X2
အဲဒီမာတိကာ အတိုင်း ကျနော် ဒီအောက်မှာ Software တွေ စုစည်းပေးသွားပါမယ်။ Mediafire လင့်တစ်ခါတည်း ထည့်ပေးလိုက်ရင် ပြီးသွားနိုင်တယ် ဆိုပေမယ့် အဲဒီလင့်နဲ့ အဆင်မပြေတဲ့ သူတွေ အတွက် တခြားလင့်လေးတွေ ပါထည့်ပေးနိုင်အောင်ပါ။ နောက်ပြီး ဒီ Soft တွေ က ဖိုင်ဆိုဒ် တအားကြီးပါတယ်။ ဖိုရမ်ရဲ တချို့ နေရာတွေမှာ တင်ပြီးပြီ ဖြစ်ပေမယ့် လင့်တွေသေနေပါပြီ။ ဒီနေရာ မှာပဲ အလွယ်တကူ တစ်စုတဝေးတည်း ရအောင် စုပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Editing Soft တွေကတော့ အသုံးအများဆုံးတွေပေါ့။ တခြားလိုချင်တာလေးတွေ ရှိရင်လဲ ကျနော်ထပ်ဖြည့်ပေးသွားပါမယ်။ Soft တစ်ခုတည်းကိုပဲ Version ခွဲပြီး တင်ပေးထားတာက Latest ဖြစ်ရင် ကောင်းတာမှန်ပေမယ့် System Requirement သိပ်များနေရင် စက်တိုင်းနဲ့ အဆင်မပြေတော့ဘူးလေ။ အဲတော့ အဆင်ပြေရာကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ ပါ
ဒီ Soft တွေ၊ download link တွေကို 2011 ခုနှစ် အထိ Latest လေးတွေ၊ လိုချင်တာလေးတွေနဲ့ လင့်တွေ အမြဲ ရှင်သန်နေအောင် ကျနော် ကြိုးစားပေးပါမယ် 2011 နောက်ပိုင်း မလုပ်ပေးချင်တော့လို့ မဟုတ်ရပါ။ အင်တာနက် အချိန်မှန်သုံးနိုင်ဖို့ အဆင်မပြေနိုင်တာရယ် ၊ အိမ်မှာ နက်ရပေမယ့်လည်း အခုလို့ upload လုပ်ပေးဖို့ အဆင်မပြေနိုင်တော့ပါ
ကျနော် ပိုစ်များကို စုစည်းပေးတဲ့ အစ်မတူးတူး ကို ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
မိသားစုဝင်များ အားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင် အောင်မြင်ကြပါစေ ...
Last edited by bonge; 11-11-2010 at 10:24 PM.. Reason: လင့်ဖြည့်
အောက်ပါအသင်းဝင် 21 ဦးတို့မှ bonge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဖယောင်း, မိုးတိန်, ဟန်မိုးလွင်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, ငြိမ်းချမ်း, ဖြိုးယံလေး, နိုးတူး, arkaraung, aungphyo, AZM, centurymg, gemini.zaw5687, Mr.Zero, phoetharlay, PoeHapGyi, thetzin, thurein, tu tu, yawnathan, zo
Last edited by tu tu; 09-03-2010 at 08:57 PM..
မိုးတိန်, ဇော်ရဲပိုင်, မေဇင်သော်, မောင်သံသရာ, daya, thetzin, thurein, yawnathan, zo
Last edited by tu tu; 09-03-2010 at 08:56 PM..
စစ်တွေသားချေ, ဟန်မိုးလွင်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, daya, thetzin, thurein, zo
အားလုံး မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ ...
Adobe Premiere Pro CS4( Latest Full Version )
စုစုပေါင်း 2.46 GB
အားလုံး ကျန်းမာ ပျော်ရွှင် အောင်မြင်ကြပါစေ ...
Last edited by tu tu; 09-03-2010 at 09:07 PM..
စစ်တွေသားချေ, ကျော်ထက်ချိန်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, AZM, daya, Mr.Zero, stability09, thetzin, thurein, Wynn, yawnathan, zo
Cyber Link Power Director Ultra 7.00.1628
စုစုပေါင်း 151 MB
ဇော်ရဲပိုင်, AZM, Lwin Thu, mmkyioo, thetzin, thurein, yawnathan, zo
စုစုပေါင်း 1.76 GB
အချိန်ရရင် ရသလို mediafire အပြင် တခြား dl link ပါ ဖြည့်ပေးသွားပါမယ်။
ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, AZM, Lwin Thu, thetzin, thurein, yawnathan, zo
စုစုပေါင်း 83.1 MB
ProCoder_3 ကို တင်တဲ့ အခါ quick time player အနိမ့်ဆုံး 7.0 or higher version လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
စစ်တွေသားချေ, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, Lwin Thu, thetzin, thurein, yawnathan, zo
စုစုပေါင်း (90.91 MB)
စစ်တွေသားချေ, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, daya, Lwin Thu, Mr.Zero, thetzin, thurein, yawnathan, zo
19-03-2010, 05:57 AM
စုစုပေါင်း (1.40 GB)
သို့-အကြွေး ( ဗမာလို ပြန်လိုက်တာ )
ဒီ software လေးကတော့ ခုမှ သုံးကြည့်တုန်းပါပဲ။ ကိုMr.I_81 က ကောင်းတယ်ဆိုလို့ စုံသွားအောင် တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ကလင့်မှာ ကိုMr.I_81 အသေးစိတ် ရှင်းပြနေပါတယ်။ သိလိုသည်များ ရှိပါက သွားရောက်မေးမြန်းကြပါ
စစ်တွေသားချေ, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, ဖြိုးယံလေး, arkaraung, AZM, daya, ko lin, Lwin Thu, pannuko, thetzin, thurein, yawnathan, zo
28-03-2010, 06:01 AM
AV Video Karaoke Maker 1.0.16 & Power Video Karaoke Pro v1.2.3
http://www.mediafire.com/?fmdjhkeiwjy ( 5.59 MB )
http://www.mediafire.com/?zoven1mukzu (5.29 MB)
( Power Video Karaoke Pro က ကိုမျိုးမင်းဇော်ထံမှ ရရှိပါတယ် )
Last edited by bonge; 28-03-2010 at 06:29 AM.. Reason: လင့်ဖြည့်
အောက်ပါအသင်းဝင် 17 ဦးတို့မှ bonge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, ဇာနည်မောင်, ပုထုဇဉ်, လမ်းပြကြယ်, သက်နိုင်, ဟန်မိုးလွင်, ဇော်ရဲပိုင်, မေယမင်း, မောင်သံသရာ, daya, htoo war, KoBaKhat, Lwin Thu, thetzin, thurein, yawnathan, zo
မင်္ဂလာပါ ( ဒီပိုစ်ကို မရောက်ဖြစ်တဲ့သူတွေ အသံကြားပြီး ရောက်လာအောင်လို့ )
ဒီပိုစ်လေးကို ပြန်လည်ကာ အသက်သွင်းစေသူကတော့ ကို zo ဖြစ်ပါတယ်။ ကို zo ရေ ကျနော် ဒီနေရာမှာပဲ အားလုံးအဆင်ပြေအောင် တင်ပေးထားလိုက်ပါမယ်။
စိတ်မ၀င်စားကြတော့ဘူးလားလို့ ဆက်ပြီး မတင်ဖြစ်တာပါ Full Version လေးဖြစ်ပါတယ်
ကျန်းမာပျော်ရွှင် အောင်မြင်ကြပါစေ ...
ဇာနည်မောင်, မောင်သံသရာ, daya, Lwin Thu, thetzin, thurein, yawnathan, zo
(အဟီး) ပြော၇မှာတော. အားနာတယ်.........
ကျနော်.၇ဲ. ကံပဲလား မသိဘူး တခါနဲ. အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာ မရှိသလောက်ပဲ....(ကျနော်ကိုယ်က ကံနဲလို.နေမှာ)
အခု ကျနော်.ကို serial number တောင်းနေလို.ပါ။
မောင်သံသရာ, Lwin Thu, thetzin
ဖြစ်ပြန်ပြီလို့ မပြောပါဘူးဗျာ။ အချင်းချင်းတွေပဲ အကို အဲဒီ folder ထဲမှာ licence agreement ဆိုတဲ့ text ဖိုင်လေး တစ်ခု ရှိတယ်လေ။ အဲဒီထဲမှာ serial:111A2-63000-00334867 ဆိုပြီးပါပါတယ် ခင်ဗျာ။ အဆင်ပြေမှာပါ။
ခုတင်ပေးမယ့် Soft အကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ ကျနော် ဒီနေရာ မှာ ရှင်းပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူက Menu ဖောက်ချင်တဲ့ သူတွေ ရဲ့အကြိုက်ပေါ့ဗျာ။
Ulead DVD Workshop 2.0 (66.49 MB)
အားလုံး အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ ...
မောင်သံသရာ, နိုင်သူရ, arkaraung, htikewailinn, KznT, thetzin, thurein, Ye Aung, zo
ကိုဘိုငယ်ရေ..မှတ်မိမလားတော့မသိဘူး.......ကျွန်တော်...ပရီးမီးယား ပရို 2.0 လိုချင်နေခဲ့တာလေ
ကျွန်တော်တို့က........၀င်းဒိုး movie maker လောက်ပဲသုံးဖူးတာ.......စမ်းဖွင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့
အစ်ကိုတင်ထားပေးတဲ့....adobe premier pro 2.0 အတွက်ကျေးဇူးတင်လျက်.......
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ ပုထုဇဉ် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, htikewailinn, Lwin Thu, thetzin, zo
သာမာန် ပုထုဇဉ်မဟုတ်တဲ့ ကိုပုထုဇဉ် ...
သိပ်မှတ်မိတာပေါ့ဗျာ။ မိတ်ဆွေရင်းတွေပဲ ကျနော် အဲဒီဖိုင်တွေ တင်ပေးခဲ့ဖူးတယ်။ ခုတော့ လင့်တွေ သေနေလို့ ဒီနေရာမှာပဲ ထပ်တင်ပေးလိုက်တော့မယ်ဗျာ။
Adobe Premiere ( Training Videos ) 376 MB
Adobe Premiere ( Ebooks ) 15.3 MB
ဒီမှာ လဲ လေ့လာလို့ ရပါတယ်။
အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ လေ့လာနိုင်ပါစေ ...
Last edited by bonge; 11-08-2010 at 10:37 PM.. Reason: စာဖြည့်
သက်နိုင်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, ဖြိုးယံလေး, daya, gemini.zaw5687, htikewailinn, Lwin Thu, thetzin, thurein, zo
အခုလို အားလုံးအတွက် ဘာမဆို လုပ်ပေးတာ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
အောင်မြင်ပါစေဗျာ။ နောက်လည်း အများအတွက် လုပ်ပေးနှိုင်ပါစေ။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ စိုင်းစံမိန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, bonge, Lwin Thu, zo
Find More Posts by စိုင်းစံမိန်း
ကျွန်တော်... procoder-3 ကို ဖိုင်ဖြေရာမှာ field ပြပါတယ်... ဒါပေမယ့်... ကျွန်တော်ရမ်းလိုက်ပါတယ်... အဲမှာ ဆက်ရမ်းလို့မရတာဖြစ်ပါတယ်... ပထမ ဒီလိုပြတာပါ...
အဲဒါက ဖိုင်ဖြေတာမှာလိုတာလား... ဒါမှမဟုတ်...ကျွန်တော်ကပဲ အသုံးမကျတာလား... နည်းနည်းလောက် ကူညီပြီးရှင်းပြပေးပါဦးနော်... စောင့်နေမယ်နော်...
Last edited by ခွန်ညီး; 07-09-2010 at 11:02 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ခွန်ညီး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, Lwin Thu, thetzin, zo
ကျနော်ဆီမှာ အားလုံး အဆင်ပြေတယ် ခင်ဗျ။ quick time player အနိမ့်ဆုံး 7.0 or higher version ရောတင်ထားလားဗျ ? မတင်ရသေးရင် အဲဒါ အရင်တင်ပြီးမှ အရင်ဟာကို အကိုဆီမှာ ရှိတဲ့ uninstaller နဲ့ ဖြုတ်ပြီး ပြန်တင်ကြည့်ပါဦး။ dl လုပ်တုန်းက အပြည့်မပါတာဆိုရင်တော့ ပြန်ပြီး dl လုပ်လိုက်ပါ။ ကျနော်ဆီမှာ အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ် အဆင်မပြေရင် ပြန်ပြောပေးပါ။
ခွန်ညီး, မောင်သံသရာ, thetzin, thurein, zo
တင်ထားတယ်..ကိုဘိုငယ်ရ.... ကိုဘိုငယ်ပြောလို့ ကွစ်တိုင်းမရှိတာတောင် သေသေချာချာဒေါင်းပြီးမှ ရမ်းထားပါတယ်... ဆဲဗင်းမှ ဆဲဗင်းပါပဲဗျာ... အဲဒါပြီးမှာ ရမ်းတာပါ... ဖိုင်ပြည့်မပြည့်ကိုတစ်ချက်လောက်စစ်ပေးပါနော်... ကျွန်တော်ဖြေထားတာကို ပြလိုက်မယ်နော်... rar ဖိုင်ကိုဖြေနေတုန်းမှာ အဲရာတက်လာတယ်လေ... အဲဒါမို့ ဖိုင်မပြည့်တာများဖြစ်နိုင်မလားလို့ပါ... သူကလည်း data2.... disk 1 လိုတယ်လို့ပြောတာကိုးဗျ...
ကြည့်ပေးပါဦးဗျနော်... တင်ထားရင်းနဲ့ ဖိုင်က မပျက်တတ်ပါဘူးနော်... အခုက ရာဖိုင်ဖြေတာနဲ့တင် အဲရာပြတာ...
မောင်သံသရာ, thetzin, zo
ဖိုင်မပြည့်တာ ဗျ။ Data2ကျန်နေတယ်။ အပေါ်မှာ ကျနော်ပေးထာတဲ့ လင့်ကနေ dl ပြန်လုပ်လိုက်ဗျာ ။
ခွန်ညီး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, thetzin, thurein, zo
ဟုတ်ပါတယ်.. ကိုဘိုငယ်ရေ... ဖိုင်ကိုလိုနေတာပါ... အဲရာပြနေတာကိုး.. အခုပြန်ဒေါင်းပြီး ပြန်လုပ်တာလည်း အရင်အတိုင်းပါပဲ... မထူးခြားပါဘူး... ဖိုင်ဖြေရင် အဲရာပြနေဆဲပါပဲ... အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ...အကြံပေးပါဦးဗျာ.. ကျွန်တော်အထင်တော့ အပ်ါကဖိုင်ကိုက လိုနေတာများလားလို့လေ... အစ်ကိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် တစ်ချက်လောက်ပြန်တင်ပေးကြည့်ပါလားဗျာ...
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ခွန်နှောင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပို့စ် 79 ခုအတွက် 396 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by ခွန်နှောင်း
background က အရောင်တွေစုံ/ရောနေရင်တော့ လုပ်ရတာ နည်းနည်းလက်ပေါက်ကပ်လိမ့်မယ်။ တစ်ရောင်တည်းဆိုရင်တော့ editing program (pinnacle, premiere, ulead, after effects)တွေမှာပါတဲ့ keying ဆိုတာကို သုံးပြီး background ဖျောက်လို့ရတယ်။ chroma key တို့၊ color key တို့ကို သုံးပြီးဖျောက်နိုင်၊ ဥပမာ background အရောင်က အနီဆိုရင် chroma key ကို အနီရောင်ပေးလိုက်။ ဒါဆို ဗီဒီယိုထဲက အနီရောင်မှန်သမျှပျောက်သွားလိမ့်မယ်။ ဒါဆို ကျန်ခဲ့တဲ့ လူကို ကြိုက်တဲ့ background video file နဲ့ ပေါင်းနိုင်ပြီပေါ့။ လူပဲယူပြီး background ဖျောက်ချင်ရင် အဲဒီ ဗီဒီယိုကို ရိုက်တည်းက background ကို အရောင်တစ်ရောင် အဖြူဖြစ်ဖြစ်၊ လူမှာဝတ်ထားတဲ့ အရောင်တွေနဲ့ ကွဲတဲ့အရောင်တစ်ခုခုဖြစ်ဖြစ် နောက်ကထားပြီး ရိုက်ရင် ပိုအဆင်ပြေကြပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုရေးမပြနိုင်တဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။ chroma key, color key စတာတွေကတော့ လူသုံးများတဲ့ editing program တိုင်းလိုလိုမှာပါပါတယ်။ video effects တွေအောက်မှာ ရှာပြီး စမ်းလုပ့်ကြည့်ပါလို့။ background ကိုအဲဒီလို ဖျောက်ပြီးပြောင်းလဲလို့ အကောင်းဆုံး ပလိုဂလမ်ကတော့ after effects ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရှင်.. အဲ...ဗျာ..
I Would Love To Change This World, But God Is Not Giving Me The Source Code. But now, I'm out of my mind because of Teresa.
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ khit100 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇေယျာအေး, မောင်သံသရာ, ဖြိုးယံလေး, bonge, hellboy, htikewailinn, Lwin Thu, thetzin, thurein, tu tu, yawnathan, zo
Find More Posts by khit100
(172 MB )
တောင်းဆိုသူ ရှိလာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
စစ်တွေသားချေ, ဆန်းမောင်, ဇီးရိုး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, အောင်လံလေး, hellboy, htikewailinn, htoo war, ko lin, thetzin, thurein, yawnathan, zo
ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ mp3 သီချင်းနဲ့
ကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့ စာတွေတွဲ ပြီး video လုပ်ချင်လို့ဗျာ
22-12-2010, 02:31 AM
မေးထားတာ အတော်ကြာနေပြီ။ အကိုက Editing Soft တွေကို ခုမှ စမ်းသုံးမယ် ဆိုရင် အပေါ်က Soft တွေထဲက နှစ်သက်ရာကို ရွေးခြယ်ပြီး လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Ulead (သို့) premiere ဆိုရင် ဆွေးနွေးချက်တွေလဲ ရှိနေသလို့ ကူညီပေးဖို့လဲ ရှိပါမယ်။ ပြန်စာနောက်ကျတာ စောရီးဗျို့ ...
စစ်တွေသားချေ, မောင်သံသရာ, daya, hellboy, khaing king, PoeHapGyi, thetzin, zo
အကိုရေ ulead မှာ မြန်မာစာတမ်းထည့်ချင်တာ
အဲဒါ ထည့်လို့ရမယ့်မြန်မာဖောင့်လေးရှိရင် ပေးပါအုံးနော်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ never အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ folder ထဲမှာ THUNT_1 ကနေ THUNT_11 ထိ ဆိုတဲ့ font တစ်မျိုးပါဝင်ပါတယ်။ ulead မှာ သုံးလို့ ရသလို အလွန်လှတဲ့ font လေးတွေပါပဲဗျာ ...
Myanmar Fonts ( 56.7 MB )
ဆန်းမောင်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, futurestar, hellboy, htikewailinn, KznT, sky4ster, thetzin, zo
ပြန်စာ - Xilisoft Video Editor 1.0
ကျွန်တော်လည်း ဒီမှာပဲ တင်လိုက်တော့မယ်နော်.......
Adobe premiere pro cs5 ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ် ဆော့ဖ်ဝဲ
လိုချင်ပါတယ် ရှိရင်တင်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
size ကတော့နည်းဘူး...1.23 GB
အကယ်၍ crack မပါခဲ့ရင်တော့ http://www.mediafire.com/?ijmiaznuzmz
မောင်သံသရာ, နိုးတူး, azp09, bagothar85, gemini.zaw5687, Lwin Thu, thetzin, tu tu, zo
Magix movie edit pro 17 plus download version keygenနဲ့crackလေးပေးပါလားဗျာ။ကျွန်တော့်မှာဆော့ဝဲပဲရှိပြီးcrack မရှိလို့ပါ။ကူညီကြပါနော်။